I-Spotify isungula uluhlu lwe "Podcast ephezulu" kunye ne "Podcast Tendencia" kwilizwe lakho | IPhone iindaba
I-Spotify isungula uluhlu lwe "Podcast ephezulu" kunye ne "Podcast Tendencia" kwilizwe lakho
Spotify ndongeze nje uluhlu ezimbini zepodcast kwiscreen sakho sokukhangela. Njengokuba yayingama-40 aphezulu, ngoku ungabona uluhlu lwezona ziphulaphulwayo kwiipodcasts kwilizwe lakho.
Ngoku unoluhlu olutsha ezimbini. IiPodcasts eziphezulu zibonisa uluhlu lweengoma ezimanyelwe kakhulu kwilizwe lakho, ngelixa iiPodcasts Trend zidwelisa ezona zintsha «Umxholo oHambisayo«, Ukwazi ukuba yintoni epheka kwangoko, ngokungathi yi-Twitter. Enye indlela yokuba "kwilogu" xa kufikwa kwiPotify zePodcasts.
I-Spotify yongeze nje uluhlu lwePodcast kwiscreen sayo sokukhangela. Ukuba ufaka udidi "lweePodcasts Hits", uya kufumana uluhlu olutsha: "IiPodcasts eziphezulu" kunye "neePodcasts eziQhelekileyo" kwilizwe lakho.
Olu luhlu lutsha luye lwasasazwa kwiimarike ezingama-26 ezahlukeneyo zeSpotify, kwaye zabonisa abasebenzisi ezona ziphulaphulwayo kwilizwe lakho. Izintlu esele sinazo ngeengoma, ngoku nazo ezimanyelwe kakhulu kwiipodcast zomzuzwana kwiSpotify.
Kwi «Podcasts eziphezulu» unoluhlu olune Ngama-200 uninzi lweepodcast yelizwe lakho, ngombonakaliso oluhlaza okanye obomvu ukuba imeko inyukile okanye iphantsi ekuvelisweni kwakhona.
Uluhlu «lwePodcast eziHambisayo» lubonisa ifayile ye Ama-50 amaninzi amamele iipodcast ezintsha, ihlaziywa mihla le, inombala oluhlaza okanye obomvu ohambelana nayo ekubonisayo njengakuluhlu oludlulileyo ukuba udumo luyenyuka okanye luyehla.
Amanye amazwe, anje ngeBrazil, iAustralia, iJamani, iMexico, iSweden, iUnited Kingdom kunye neMelika, anikezela ngeenkcukacha ezithe kratya kwaye bohlula ezona podcasts zibalaseleyo ngokwamanqanaba, evumela abasebenzisi ukuba bacoce ngcono ukukhangela kweyona audios iceliweyo.
Olu luhlu lutsha nalo bazisiwe kwiiPodcasters zabo. Abadali abanee-audios kuluhlu baya kufumana isaziso kwiphaneli yabo yolawulo ebacebisa ngokufakwa, ukuze babhengeze kwaye babelane ngempumelelo yabo kwinethiwekhi yoluntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » I-Spotify isungula uluhlu lwe "Podcast ephezulu" kunye ne "Podcast Tendencia" kwilizwe lakho
Ungayitshintsha njani ibhetri ye-Apple Watch
Uhlaziyo lwamva: iOS 13.6, iwOSOS 6.2.8 kunye neKhayaPod 13.4.8